缅甸房地产 | 仰光市 - Bahan - 公寓 - 4BHK condominium room in Shwegonedaing Tower for sale.
4BHK condominium room in Shwegonedaing Tower for sale.
Grd 楼 / 8层
It is located in Shwegonedaing, the location which is crowded and convenient for transportation and easy to get Myaynigone and Tarmway. It isafew minute drives to Embassy of Singapore, Bahan Post Office, Shwedagon Pagoda, People’s Park, Kandawgyi Park and Market Place. Being close to bus-stop, it is very convenient for taking buses.
Measuring 1500 square feet there is one master bedroom attached bathroom, three single bedrooms, living room, dining area, common bathroom and kitchen. It is parquet flooring and tiled flooring. Being high level, there is good ventilation and natural light in the room. 24 hour security, car parking, generator for the lift, beautiful ceiling lightings, wardrobes, double bed, dining table with chairs and four air-conditioners are already provided. It is ready to move after buying it.
လူစည်ကား၍ သွားလာရ လွယ်ကူသည့် ရွှေဂုံတိုင်အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ မြေနီကုန်း ၊ တာမွေ တို့သို့ လွယ်လင့်တကူသွားလာနိုင်ပါသည်။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘဏ်များလည်း များစွာ ရှိသည်။ စင်္ကာပူသံရုံး၊ ဗဟန်းစာတိုက်၊ ရွှေတိဂုံဘုရား၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်၊ ကန်တော်ကြီးတို့နှင့်လည်းနီးသည်။ Market place နှင့်နီးသည့်အတွက် ဈေးဝယ်ရ အဆင်ပြေသည်။ ရွှေဂုံတိုင်မှတ်တိုင်တွင် ဆင်း၍လမ်းလျောက်သွားပါက ၂မိနစ်အတွင်းရောက်သည့် အတွက် ဝန်ထမ်းများအတွက် အလွန်အဆင်ပြေသည်။
၁၅၀၀ စတုရန်းပေ ရှိ၍ Master Bed-1ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း-၃ခန်းပါဝင်သည်။ မိသားစုနေထိုင်ရန်(သို့)ရုံးခန်းဖွင့်ရန် အလွန်သင့်တော်သည့် နေရာဖြစ်သည်။ တစ်အိမ်လုံးပါကေးများခင်းထားပြီး ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုနှင့် အိမ်သာရေချိုးခန်းတို့တွင် ကြွေပြားခင်းထားသည်။ အလွှာမြင့်ဖြစ်၍ သဘာဝအလင်းရောင်နှင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည်။ ကားပါကင် ကျယ်ဝန်းသည့်အတွက် ကားရပ်ရန် အဆင်ပြေသည်။ ၂၄နာရီလုံခြုံရေးရှိသည်။ မီးပျက်ပါက မီးစက်ဖြင့် ဓာတ်လှေကား မောင်းပေးသည်။ ရေချိုးကန် (Bathtub) ပါသည်။ နံရံများ၊ မီးလုံး၊ မီးဆိုင်းများ ၊ အခန်းတွင်း decoration များ အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ နံရံကပ်ဗီဒိုများ၊ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်၊ ထမင်